Enweela m ebenrụọrụweebụmaka ihefọrọnke nta kaọbụrụ15afọugbu a，nkembụmaka obiụtọm naemesịandịọzọdka onye mmebeweebụ.
N’imeafọiri naọkaraahụ，agbalịrịmọtụtụndịaghadịicheiche。 Ana m ejindịụrụatọdịicheicheiche maka ebenrụọrụweebụmdịicheiche edebeọtụtụn’imesaịtịm na。从2001年开始，在10月10日之前.
1 Nsogbu Nsogbu网站
2 Ahụmm na onyena-ahụmakandịdaobodo
Ọbụrụnaịnọna-emepụtaiheịntanetịogologo ogekarịasekọndatọ，ọga-abụrịrịnaịga-enwe nsogbu na onyeọbịamaọbụabụọ。 E nwere ihe ole na oledịnjọkarịaịnwetasaịtịgịnanetwọkọhụrụahụ，na-eche naọdịmma ma na-agbaọsọna nsogbundịana-apụghịidozi.
Nwelitenkwarụ-lite imelite maọdịghịewe
Nkwadoteknụzụ网站n’aka onyenọna mbaọzọmaịpụghịịghọtaiheọna-ekwu n’ihiụdaolu
Nkwụsịtụna-atụghịanyadịkabandwit maọbụọnụụgụgụnke Ngalabaịnwere ike itinye
N’ime nsogbundịa尼罗河，aghaghịmịsịna ngwa ngwa maọbụdara ogbenyeahịabụkachanjọ。请在ụụụụụụụụụụụEn En ya ya。像是Nagidemmezigharịgwọgwọmgbeụfọdụ。 Ọrahịandịna-adịghịmmabụotu n’ime ihendịsiri ikeịmekọrịta，n’ihi naọna-eme kaọghara ikwe omume idozi nszibuọbụlai nwere。 Iheọzọnke na-akpataọtụtụnsogbubụogena-adịghịngwa maọbụala oge。 Ndịbịagịga-enwenkụdammụọmaka ihendịa，ịga-enwekwa自我.
N’oge gara aga，enméfọdụakụkọọjọọbanyeresaịtịna-agbada ma na-ewughachi（nkega-akụzirigịngwa ngwa iji na-edebesaịtịgịmgbe niile）。 N’elu nkeahụ，en mreresụụndịna-anwaleịkwụụgwọsiten’ịgbaụgwọn’ogena-adịghịanya，na-agbanwe agbanweụgwọoge，na-akwụụgọaka akapukpub 。姆贝（Mgbe ahwe）和尼古拉（mile）瓦德（mile gbadara n’enwegh） Iche，ebeọbụotu iheahụnakọmpụtaọbụlamgbalịrịna ndile niile m gwara ka mgbalịaịnwetasaịtịm na njedebe ha。 ike是na na mdịntakịrịiheụlọọrụweebụnakwa na ikweschantụkwasịobi naọrụndịahịabụabụọn’imeàgwàndịkachaemetụtam.
Ahụmm na onyena-ahụmakandịdaobodo
M gbanwere na OnyeỌchịchịEbeỌchịchịmakaọtụtụn’imeakụkọm na September nke 2007.
Ugbu a，mụna ha hanọrọihefọrọnke nta kaọbụrụafọise，nkekachasịdịrịm kamụnaụlọọrụọbụlanwere。 Ihefọrọnke nta kaọbụrụozugbo，ahụrụm ihedịiche na naọrụndịahịa。 Enweghịmịjụmaọbụrụna ha ha na-enyefe ebenrụọrụweebụmdịka nzaghachi，nyere.
Oge ole na ole enwere m nsogbu，ha azaghachiri ozi-e n’ime nkeji，ọbụghịụbọchịmaọbụawa。 N’otu oge，ọna-ewe haụbọchịole na ole ka hach​​ọpụtaihe gbasaraazụ，ma hanọgiderenakọntaktịma debe m naọganihu。 Ekwesịrịmịsịna ndrọrụaka na-akwadondịmmadụna OgbeNdịdana-enwenghọtana obiụtọ.
Mgbendịomempụwakpoosaịtịm，ha nyeere m akaịmataotúm ga esi esi nwetaghachi ya ebeọbụma nye m ozi iji chebe ya。 heụịịji ji，e，e，e e e eịma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma.
100dịghịụlọọrụnhazi nke zuruokè100％nke ogeahụ。 ga-amasịmịnọgidena-enweghịmmasịna nyocha a makọọnsogbu，ma enweghi mọtụtụ。 Anaghịmejikọtaya na OnyeỌchịchịObodo，ọzọkarịaịchọtasaịtịm na ha，maakwụghịm ha iji dee nyocha a。 Mna-akọnanịahụmịhemdịkaotu n’imendịahịaha。享受美好的一天?
内齐Ihe kpataraọdịichedịna OgbeNdịdaỌchịchịbụna ha na na-azaghachi okwundịahụngwa ngwa，ọkachamaranaafọojuju m。 Nkeahụbụihe na-egbochi mịbanyena sava ha ruoọtụtụafọna njedebe.
Onyena-elekọtandịbịana-enyemkpokọtaBochum，nchịkọtanke Bochum nandịchịkwa经销商。 arabụrụnaịchọrọọrụndzọzọraara onwe ha nye，ha nwereọtụtụnhọrọ，dịkandịsava raara onwe ha，raara onwe ha nye，maọbụsava nzuzo onwe.
ezbụezie naọnụahịanwere ike dd iche，maọbụrụnaịchọrọchịkọtaisi maka otusaịtị，ịnwere ikeịnweta10 GB ohere na 200 GB bandwit makananụat $ 4.95kwaịdwa makwụọụgwọn’ọdịnihu。 we nwekwara ikeịkwụụgwọkwaọnwamaọbbanrụnaịchọọịmebanyeegodịotúahụogologo oge.
galbụrụnaịchọrọịkwadoọtụtụngalaba，ịga-achọkwuohere。 Akwụkwọha "共享金" $ 20.GB 20 GB。$ 25.95 kwaọnwa。。。GB。wa。25 $ 25 25 25 25 25 25 25。 Ịga-echekwa maọbụrụnaịkwụọụgwọmakaọtụtụọnwaruoafọatn’ọdịnihu.
Njirimara nke Onye OgbeNdịdana-enyedịmma makaọtụtụweebụsaịtị。恩格西·恩克·奥格韦·恩特勒·勒·哈恩·恩韦斯·哈恩（N’ihi yaịnwere ike inye ya ncha）。 Panyere a na-enyegịohereịnwetaihe niile sava ha ga-enye。 F-F，，，ọọọọọ。数据全部存储在SQL Server数据库中，又名“数据存储库”，“数据存储库”，“数据存储库”，“数据存储库”，“数据存储库”和“数据存储库”。艾克·格涅耶（Ikegụnyere）：
Nkọwamaka nkesana-adịgasịiche，manaịkekọrịtangwugwuọtụtụndịga-ahọrọ，ya mere，anyịga-ele anya ebe a.
Nkwado ndabere na mpaghara kwaụbọchị
Onyena-elekọtaobodo na 24/7 na-akwado nkwado。在nkwadontanetịozi-e，mabọ网站和itinye okuekwentị等网站上，您都可以访问nkwado aka网站。 Dịka m kwuru nambụ，omm mmeghachi omumena-adịm ngwa ngwa。 Nnyocha onwe onye na iche icheblọọgụonwe onye yiri kaọdịmma.
Ndịahịanasaịtịahụna-enye ihenlekọtabanyere只是ha jiamasịOgbeNdịda。 Ha na-enyeụbọchị30 Ego返回保证.
Pịgharịagaa na "家" peeji ijichọpụtaonyinyendịdịugbu a（n’okpuru’Nkwalite Ugbu A’）iji nyere aka chekwaa obere ego.